Gappx Apk Dhawunirodha Ye Android [ Wana Mari] - Luso Gamer
Gappx Apk Dhawunirodha Ye Android [ Wana Mari]
Kana iwe uri kusangana nekushungurudzika kukuru nekuda kwekushaya basa uye kutsvaga mikana. Ipapo Gappx ndiyo yakanakisa mukana wevashandisi veAndroid kuti vawane mari yakanaka ipapo. Iyo yazvino vhezheni yeApk faira inosvikika kuti uwane kubva pano.
Kunyangwe hupfumi hwenyika hwaive huchikura zvakanyanya nekufamba kwenguva. Nekuda kwekuwedzera kwehupfumi, vanhu vari kuwana mabasa akanaka muzvikamu zvavanofarira. Nekudaro, kubva kutanga kwa2020, nyika inotanga kusangana nedenda.
Nekuda kwedambudziko redenda, masangano ese kusanganisira maindasitiri ekuita mari akapinda mukuvhara mode. Nemhaka yokuparara kukuru uku, mamiriyoni evanhu akarasikirwa nemabasa. Asi ikozvino vagadziri vadzoka neiyi inoshamisa Android Kuwana Application izvo zvinoita kuti vanhu vawane mari ipapo.
Chii chinonzi Gappx Apk
Gappx Android inzvimbo yakakwana yepamhepo inoita kuti nhengo dzakanyoreswa dziwane mari yakanaka ipapo ipapo. Rangarira kuwana mari hakudi ruzivo kana magwaro ane basa. Ingopedzisa mamwe mabasa akareruka uye uwane mari yakanaka.
Mazuva ano kuwana basa kwave kwakaoma uye hazvitomboiti. Nekuti kuwanda kwemabasa nechiyero chekushaikwa hazvienzaniswi. Kunyangwe musika uri kukura zvakanyanya, vanhu vazhinji vachiri kusangana nekushaikwa kwemabasa.
Chimwe chechikonzero chikuru chekushaikwa kwemabasa chinoonekwa sedenda rekurwisa. Pashure pokurwisa kukuru uku, sangano rimwe nerimwe rakavharwa zvachose. Kunyange masayendisiti akatounza mishonga yekudzivirira vanhu pamusika.
Zvakadaro, hupfumi hwenyika huri kuramba huchidzikira. Mumamiriro ezvinhu akadai, mamwe maindasitiri ane chekuita nezvehutano akabudirira uye anopa basa rakakura. Uyezve iyo online yebasa system inoratidzawo kukosha kwemasevhisi akadaro muhupenyu hwevanhu.
zera 14 MB
Developer GAPPX TECHNOLOGY CO., LIMITED
Package Zita com.gx.app.gappx
Vanotambira pamhepo vanosanganisirwawo pakati pevasina kukanganiswa. Nekuti kudiwa kwemabasa epamhepo kwakawedzera zvakanyanya mushure medambudziko redenda. Mamirioni avanhu vakatozvibatisa muhurongwa uye mamirioni achiri kugadzirisa.
Avo vakanaka muhupenyu hunoshanda uye vakawana ruzivo. Zvingaome kuwana basa pamhepo nekuti munda unoonekwa wakasiyana zvachose. Saka tichifunga nezvekushaikwa kwemabasa nekunyaradza kwevanhu, vagadziri vakagadzira chikuva chitsva.
Iye zvino avo vasingashande vashandisi venhare vanogona kunetseka kuwana basa. Unogona kuwana purofiti nyore ipapo pasina kumirira mhinduro yekambani. Kunyangwe kuwana kwave nyore zvekuti hazvimboda chitupa chechiitiko.
Vazhinji vanotanga vanodzivirira mapuratifomu akadaro nekuda kwehunyanzvi hushoma. Vanotenda vasina hunyanzvi hazvibviri kuita masevhisi. Asi muchokwadi, kushandisa chikuva kuri nyore kwazvo uye hakudi hunyanzvi hwekushandisa.
Vashandisi veAndroid vanokumbirwa kuti vatore faira reapp kutanga. Wobva waiisa uye unyore nepuratifomu. Iye zvino pinda iyo huru dashboard, tsvaga inopihwa mabasa. Tevedza nhungamiro, pedzisa mabasa uchipedza nguva yakawanda.
Rangarira mabasa anosanganisira kuona Vhidhiyo, Kuisa Maapuro, Kuongorora Mavhezheni eMiedzo uye Kupedza Nguva uchiongorora mapuratifomu. Kana iwe uine Android smartphone uye uchitsvaga mukana wekuwana online. Wobva waisa yazvino vhezheni yeGappx Dhawunirodha.
Iyo faira yeapp yakasununguka kurodha pasi.
Kuisa iyo app kunopa mikana yekuwana.
Kutanga, vashandisi vanokumbirwa kunyoresa nepuratifomu.
Kuti unyore nharembozha ingangoda.
Svika iyo huru dashboard uye tsvaga akasiyana mabasa.
Kupedzisa mabasa kunopa mari yegoridhe.
Makoini anozowanikwa anodzikinurwa kuita mari chaiyo.
Nezvekutengeserana, nzira yekubhadhara yakatsetseka yakawedzerwa.
Iyo App interface iri nyore uye mobile-hushamwari.
Maitiro ekurodha Gappx App
Parizvino application irikusvikika kuti uwane kubva kuPlay Store. Nekudaro, iyo faira reapp inoiswa muchikamu chinorambidza. Zvinoreva kuti chete mafoni e-android anokodzera anotenderwa kuwana iyo Apk faira mahara kuburikidza nePlay Store.
Vaya vashandisi venhare vasina kukodzera vangatadza kuwana faira reApk. Saka avo vashandisi veAndroid vari kutsvaga online echokwadi chikuva. Izvo zvinobvumira vashandisi kurodha iyo Apk faira zvakananga nechero mvumo vanofanira kushanyira webhusaiti yedu.
Iwo Android app mafaera anowanikwa pano kurodha ndeye epakutanga. Tisati tapa maApk mafaera mukati mekurodha chikamu, isu tinoisa iwo pamusoro akasiyana mafoni. Isu tinoisa zvakare mamwe mafaera eapp pamusoro pemidziyo yakasiyana uye takawana iyo application yakatsetseka uye yakachengeteka.
Pano pawebhusaiti yedu, mamwe akasiyana maapplication ekuwana anowanikwa. Izvo ndezvechokwadi uye zvakare inopa online mari. Kuti uongorore aya maapplication ndapota tevera maURL ataurwa. Ndivo Nanovest Apk uye Fiewin Apk.
Saka hauna basa uye wakagumbuka nekuda kwekushaya mikana. Zvadaro tinokurudzira avo vashandisi veAndroid kuisa Gappx Apk. Izvo zvinosvikika kurodha kubva pano nekudzvanya imwe sarudzo yemahara pasina mvumo.
Categories Entertainment, Apps Tags Kuwana App, Gappx, Gappx Apk, Gappx App, Gappx Download Post navigation
Arattai Apk Dhawunirodha 2022 Ye Android [Yazvino]
VTube Studio Apk Dhawunirodha Ye Android [2D Anime]